Mutambo mutsva unowanikwa muApple Arcade: Ngano dzeUmambo | IPhone nhau
Mutambo mutsva unowanikwa muApple Arcade: Ngano dzeUmambo
Ngano dzeumambo Kumhanya ndiwo mutambo mutsva unowanikwa paApple Arcade, chikuva icho kwemwedzi miviri chisina kuwana chero zita nyowani, chikuva icho Ndaigona kuve nemazuva akaverengwa nekuti, kunyangwe ichiwanikwa kuburikidza neApple One, vashandisi Ivo havasi kuratidza kufarira pachikuva ichi.
Musi waApril 2, Apple yakawedzera gumi nemaviri mazita kuApple Arcade, mazita akadai seNBA 2K21 Arcade Edition uye Star Trek: Ngano kutumidza yakanyanya kurova, kuwedzera kune yakawanda Classics. Kubva ikozvino, chikuva ichi chakatambura nemusoro wekusanaya kwemvura, kusanaya kwakapera neiyi nyowani zita, iyo ichateverwa naFrenzic: Ooverime munaJune 18.
Ngano dzehumambo ndeye play play mairi isu tinofanirwa kusarudza boka remagamba, kubva pakati pegumi nerimwe anowanikwa aine hunyanzvi hwakasiyana nemasimba, kuti afambe kuburikidza nehumambo hwekufungidzira uye kurwisa zvikara zviri chikamu chekutyisidzira kwepasiratidziri.
Sezvo isu tichifambira mberi kuburikidza nemutambo, tinoenda kuvhura magamba matsva mune zita mune yatinofanira kufambisa magamba edu kuburikidza nehexagonal grid kuchinjisa hunyanzvi hwavo kune edu ekurwisa maitiro.
Iri zita idzva rinongowanikwa chete kuburikidza neApple Arcade ye iPhone, iPad, Mac uye Apple TV. Inoenderana nemidziyo ine touch skrini uye isu tinogona zvakare shandisa masimba ekudzora.
Iko kupisa kuri kuuya, kupisa uko kwakabatana nemwedzi mitatu yezororo kune vadiki, saka iri myakanaka oment kushandisa iyi chikuvaNekudaro, zvinoita sekunge, kusiyana negore rapfuura panguva ino, nhau, kana dzikasvika, dzichadaro nekudonha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mutambo mutsva unowanikwa muApple Arcade: Ngano dzeUmambo
Pindura kuna Aleksandar
Iyo yekushandisa Mifananidzo muIOS 15 ichatizivisa kubva kupi application iyo mifananidzo inouya